Barcelona oo Ka Adkaatay Kooxda Atletico Madrid “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Kooxda Barcelona ayaa garoonkeeda Camp Nou 3-1 uga badisay kooxda Atletico Madrid.
Ciyaaryahan Lionel Messi ayaa inta aysan ciyaarta bilaaban waxaa la siiyay abaal marin uu ku muteystay in uu jabiyay rikoorkii gool dhalinta ee u yaalay horyaalka Spain.
Gudoomiyaha kooxda Barcelona Jose Maria Bartomeu iyo guddoomiyaha kooxda Atletico Enrique Cerezo ayaa soo qaatay hal ku dhigyo ay ku garab istaagayaan dadkii arbacadii lagu dilay xarunta wargeyska ee Charlie Hebdo ee dalka faransiiska.
Kooxda Barcelona ayaa goolka la hor martay,waxaana daqiiqadii 12-aad ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryaha Neymar.
Ciyaaryahan Luis Suarez ayaa daqiiqadii 35-aad ee ciyaarta goolka labaad u dhaliyay u dhaliyay kooxda Barcelona,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Ciyaaryahan Mario Mandzukic ayaa bilowgii qeybtii labaad gool rigoore ah u dhaliyay kooxda Atletico Madrid.
Ciyaaryahan Lionel Messi ayaa dhamaadkii ciyaarta goolka sedaxaad ee quusinta u dhaliyay kooxda Barcelona.
Ciyaartoyda labada kooxood ayaa dhowr jeer gacanta iskula tegay,iyadoo garsooraha uu bixiyay dhowr kaar oo digniin ah.
Kooxda Barcelona ayaa kaalinta labaad uga jirto horyaalka Spain ee La Liga,waxana ay leedahay 41-dhibcood,halka kooxda Atletico Madrid ay horyaalka Spain uga jirto kaalinta sedaxaad,iyadoo leh 38-dhibcood.
Ra’iisul wasaare Cumar Cabdirashiid oo magacaabay golaha Wasiirada "Dhageyso"